अटो सम्बन्धि Archives - Nepali in Australia
Category: अटो सम्बन्धि
माइलेजको साथमा २०२१ स्टार सिटी प्लस बाइक आएको छ । यसमा ईकोट्रस्ट फ्युल इन्जेक्सन टेक्नोलोजीको साथमा अपडेट गरिएको छ । सो टेक्नोलोजीको कारणले पुरानो मोडलको तुलनामा नयाँ बाइकले १५ प्रतिशत बढी माइलेज दिन्छ । नयाँ बाइकमा एलईडी हेडल्याम्पको साथमा युएसबी मोबायल चार्जर पनि समावेश गरिएको छ । नयाँ स्टार सिटी प्लस बाइक रेड ब्ल्याक ड्युअल […]
September 10, 2021 autherLeaveaComment on आरटीआर २०० फोर भी मोटरसाइकल नेपालमा सार्वजनिक, कति पर्छ मूल्य ?
काठमाडौं । टीभीएस आरटीआर २०० फोर भीको बीएस ६ भर्सन नेपालमा सार्वजनिक भएको छ ।जगदम्वा मोर्टसले आरटीआर २०० फोर भी आरटी एफआई नेपालमा सार्वजनिक गरेको हो ।केही समय अगाडि कम्पनी स्मार्ट कनेक्ट फिचरका साथ एलइडी हेडल्याम्पमा अपडेट गरेर सार्वजनिक गरेको कम्पनीले यो साता बीएस ६ भर्सन सार्वजनिक गरेको हो । जगदम्बा मोर्टसका अध्यक्ष शाहिल अग्रवालले […]
August 29, 2021 autherLeaveaComment on बुलेट बाईकमा आयो अति शानदार नयाँ मोडल, १ लाख २५ हजार ८२५ मात्र मुल्य
August 26, 2021 autherLeaveaComment on एक्कासी किन घट्यो १५० सि-सी पल्सर बाइक को मूल्य यति धेरै ?
एक्कासी किन घट्यो १५० सि-सी पल्सर बाइक को मूल्य यति धेरै ? काठमाडौं । बजाज मोटरसाइकलको सबै भेरियन्टको मूल्य बढ्दा यस पटक एउटा भेरियन्टको मूल्य घटेको छ । बजाजको आधिकारीक विक्रेता हंशराज हुलास चन्द एण्ड कम्पनी प्रालिले विक्री गर्दै आएको पल्सर १५० को मूल्य घटाएको छ । नेपालमा विक्री हुने १५० सीसी सेग्मेन्टमा बजाज पल्सर […]
August 20, 2021 autherLeaveaComment on होन्डाले सार्वजनिक गर्यो एड्भेन्चर मोडल सीबी २०० एक्स, कति पर्छ मूल्य ?
काठमाडौँ । होन्डाले इन्ट्री लेवल क्रसओभर बाइक होन्डा सीबी २००एक्स भारतमा लन्च गरेको छ । यसको मूल्य १ लाख ४४ हजार ५ सय भारु तोकिएको छ । हाल बजारमा प्रचलित हर्नेट १८० भन्दा १४ हजार भारु महंगो छ । सीबी२००एक्स एक प्रकारको कम्युटर बाइक हो, जसमा लामो स्टान्स, अपराइट राइडिङ पोजिसन, एड्भेन्चर डिजाइन र ड्युअल […]
August 13, 2021 autherLeaveaComment on नेपालमा बनेको बाइक नेपालिले नै किन्न नसक्ने , कति छ नेपालमै बनेको बाईकको मुल्य ?
यात्रि मोटरसाइकिल्स, अपरेसन पछाडि आधिकारिक दिमाग, पहिलो नेपाली निर्मित इलेक्ट्रिक मोटरसाइकलमाविवरण खुलासा। कार्यक्रमले दुई यात्री उत्पादनहरू प्रदर्शन गर्यो: प्रोजेक्ट जीरो (P0) र प्रोजेक्ट वन (P1)। लगभगएक बर्ष पछि, यात्री मोटरसाइकलले मूल्य विवरण सहित प्रमुख विवरणहरू प्रकट गरेको छ! त्यसो भएपछि, हामीले यात्रिको अत्यधिक महत्वाकांक्षी उत्पादन: प्रोजेक्ट शून्यको द्रुत सिंहावलोकनको लागि पर्याप्तजानकारीहरू पाएका छौं। यात्री परियोजना […]
August 9, 2021 autherLeaveaComment on केटीएम ड्युक ७९० नेपाली बजार भित्रिदैँ, आजदेखि बुकिङ खुल्ला, कति पर्छ मूल्य ?
काठमाडौं, नेपाली बजारमा २४ लाख मूल्य पर्ने केटीएम ड्युक ७९० आउने भएको छ । नेपालको लागि केटीएम बाइकको आधिकारिक वितरक हंसराज हुलास चन्द एन्ड कम्पनीले आज अर्थात सोमबारदेखि बुकिङ खुल्ला गरेको हो । बीएस ४ इन्जिनयुक्त यो बाइकमा ७९९ सीसीको प्यारालल ट्विन इन्जिन दिइएको छ । जसले १०३ बीएचपी पावर र ८६ एनएम टर्क जेनेरेट […]
July 30, 2021 autherLeaveaComment on एक्कासी किन घट्यो १५० सि-सी पल्सर बाइक को मूल्य यति धेरै ?
July 27, 2021 autherLeaveaComment on टाटाको विद्युतीय कार नेक्सन ईभी नेपाल भित्रियो, मूल्य ३५ लाख ९९ हजार…
टाटा मोटर्सको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता सिप्रदि ट्रेडिङ प्रा.लि.ले टाटाको नेक्सन ईभी भित्र्याएको छ । भारतीय बजारमा सर्वाधिक विक्री भईरहेको नेक्सन इभी नेपाली बजारमा भित्रिएको हो । टाटाले जिपट्रोन प्रविधिमा आधारित यो विद्युतीय एसयूभी वायु प्रदुषणरहित रहेको जनाएको छ । १२९ पीएस पावर र २४५ एनएम जेनेरेट गर्ने नेक्सन ईभी ९.९ सेकेन्डमै ० देखि १०० […]
July 5, 2021 autherLeaveaComment on फेरि बढ्यो बजाज बाइकको मूल्य
काठमाडौं : बजार बाइकको मूल्य फेरि बढेको छ, नेपालका आधिकारिक वितरक हंसराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनीले बिहिबारदेखि लागू हुने गरी नयाँ मूल्य सूची सार्वजनिक गरिएको छ। अहिले नेपाली बजारमा बजाजको मूल्य बढ्दै गएको छ । नेपालमा बजाज बाइकले राम्रो बजार पाइरहेको छ । बजार बाइकको मूल्य फेरि बढेको छ। नेपालका आधिकारिक वितरक हंसराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनीले […]